Fundamentals of Federalism Online Training (Batch - 8) - PAÑÑĀ Online School
Fundamentals of Federalism Online Training (Batch - 8)
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသီးသီးကို စတင်လေ့လာလိုသူများ၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်ကို စတင်လေ့လာလိုသူများ၊ နိုင်ငံရေးမူဝါဒများအားလေ့လာလိုသူများ၊ ဖက်ဒရယ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများအား စတင်လေ့လာလိုသူများ၊ ပါတီနိုင်ငံရေးတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားလိုသူများ၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို စနစ်တကျ အတူတကွ ဆွေးနွေးဖလှယ် လိုသူများ။
1. Introduction to Federalism
2. Unity and Diversity
3. Basic Principles for Distribution of Power
4. Introduction to Fiscal Federalism
5. Introduction to Local government
6. Constitution and Federalism
ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အခြေခံသဘောသဘာဝများ၊ အခြေခံအဂါရပ်များ၊ အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများသာမက ၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုပုံစံများ၊ အများပါဝင်နိုင်မှုအားကောင်းသော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ စုံလင်ကွဲပြားမှုများနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံများ အတူတကွလေ့လာနိုင်များဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကိုလည်း လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကမ႓ာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးလျက်ရှိနေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ သဘောသဘာဝများ၊ အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့် အားနည်းချက်၊ စိန်ခေါ်မှုများကို သိရှိကြဖို့ရန် လိုအပ်လာပြီဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အခါ ဒီမိုကရေစီကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသလား။ အစို ရတစ်ရပ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသလဲ။ စုံလင်ကွဲပြားမှုတွေများတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ရော ဘယ်လိုအာမခံချက်တွေရှိနေပြီလဲ စသည့်အကြောင်းအရာများစွာကို နိုင်ငံတကာဥပမာ၊ မြန်မာနိုင်ငံဥပမာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Introduction to Federalism(PDF)
01. Introduction To Federalism
02. Key Features Of Federalism
03. Khit Thit Political Design
04. Federalism, Decentralization And Democracy Final
05. The Advantages Of Federalism Final
ယနေ့ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ မတူညီတဲ့နိုင်ငံများမှာ နိုင်ငံတည်ဆောင်ရေးလုပ်ဆောင်ရင်း လူမျိုးနဲဲ့့ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပါ် မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပုံအမျိိုးမျိုးဟာ မတူညီတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ မှာ ရှိနေပီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို တချို့ကကြောက်နေကြတယ် တချို့ဟာ တမျိုးတည်း တညီတည်း ဖြစ်သွားအောင် အတင်းညှိယူနေကြတယ်၊ ထိန်းချုပ်စီမံဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ဒါကို ဒီသင်ခန်းစာမှာ စုံလင်ကွဲပြားမှုဟာ သဘာဝဆိုတာရယ်၊ လေးစားဖို့၊ နေရာပေးဖို့ ၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို ့ရည်ရွယ်ရင်း အခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ စီမံခန့်ခွဲသလဲဆိုသည့် အခြေခံသဘောတရားကို နားလည်စေချင်သောကြောင့် စုံလင်ကွဲပြားမှု ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကို ပြင်ဆင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Unity In Diversity (PDF)
02. စုံလင်ကွဲပြားမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းမိတ်ဆက်
03. အဘယ်ကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ရွေးချယ်ကြသနည်း
04. စုံလင်ကွဲပြားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲရာ၌ ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၏ရွေးချယ်မှုများ
Basic Principles for Distribution of Power
ကနဦးအနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းအဆက်အစပ်ကို တင်ပြဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ထို့နောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအမျိုးအစားများနှင့် အာဏာခွဲဝေပုံနည်းလမ်းများကိုလည်း နိုင်ငံတကာဥပမာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးသွားပါမည်။ ထို့အပြင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေမှု၏ လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းအရှိတရားများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်သလို မည်သည်တို့က မြန်မာ့ဖက်ဒရယ်စနစ် အာဏာခွဲဝေခြင်းအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည်ကို အတူတကွ ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Basic Principles for Distribution of Power (Basic) - PDF
01. Basic Principles For Distribution Of Power
02. Types Of Power
03. Types Of Dop
04. In Some Form Of Power Sharing
05. Operational Reality
Introduction to Fiscal Federalism
- ဖက်ဒရယ် ဘဏ္ဍာရေး စနစ် ဆိုတာ ဘာလဲ?
- ဖက်ဒရယ် ဘဏ္ဍာရေး စနစ် ဘာကြောင့် အရေးပါသလဲ?
- ဖက်ဒရယ် ဘဏ္ဍာရေး စနစ်၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ
- အသုံးစရိတ် တာဝန်ခွဲဝေခြင်း - အခြေခံ မူများ နှင့် ဥပမာများ
- အခွန်တာဝန် ခွဲဝေခြင်း - အခြေခံ မူများ နှင့် ဥပမာများ
- မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိ အခြေအနေအား အခြား နိုင်ငံများ နှင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း
4 Video(s), 1 Reading(s)
Introduction To Federalism And Federal Intergovernmental Finance (PDF)
01. Introduction To Federalism And Federal Intergovernmental Finance
02. Expenditure Assignments
03. Taxation Assignments
ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအကြောင်းပြောကြသည့်ပခါ ဒသေန်တရအစိုးရများသည် အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပါသည်။ ဒေသန္တရ အစိုးရများသည် လူထုနှင့်အနီးစပ်ဆုံး အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဖြစ်ပြီးအခြေခံလူမှုဘဝနှင့်ဆိုင်သည့်အရေးကိစ္စများကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။ယခုသင်ခန်းစာတွင်ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင်ဒေသန္တရအစိုးရများ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအကြောင်း၊ဒေသန္တရအဆင့် ဖက်ဒရယ်အစီအမံများအကြောင်းဆွေးနွေးထားပါသည်။
01. Introduction To Local Government
02. Role Of Local Government
03. Reason To Interest In Local Government
04. Study Country
05. Study International Country (2)
Constitution and Fedrelism
ယခုသင်ခန်းစာဟာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခြေခံဥပဒေရဲ့ အနှစ်သာရတွေ၊ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာမှာ ဖက်ဒရယ်အစီအမံတွေ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရေးဆွဲကြတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကို အခြေခံကျကျ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။
This section is discussing about the importance role of constitution in federal countries. And also this section explains about the key concept of constitution and federal arrangements in constitution.
Constitutions and Federalism_(PDF)
01.အခြေခံဥပဒေ နှင့် ဖက်ဒရယ် အစီအမံများ (၁)
02. အခြေခံဥပဒေ နှင့် ဖက်ဒရယ် အစီအမံများ (၂)
03.အခြေခံဥပဒေ နှင့် ဖက်ဒရယ် အစီအမံများ (၃)
04. အခြေခံဥပဒေ နှင့် ဖက်ဒရယ် အစီအမံများ (၄)